Neymar oo hadii uu ku laabto Barcelona lakulmi doona 6 Sano oo Xabsi ah Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Neymar oo hadii uu ku laabto Barcelona lakulmi doona 6 Sano oo Xabsi ah Sabab?
Published on October 31, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(01-11-2018) Cayaaryahanka kooxda PSG iyo Xulka dalka Braziil Neymar ayaa looga digay in uu ku laabto Horyaalka dalka Spain iyo kooxda Barcelona digniintaas oo ku aadan dhibaato weyn oo uu kala kulmi karayo halkaas.
Mid ka mid ah Dacwad oogayaasha dowlada dalka Spain oo lagu Magacaabo Jose Maria Vazquez Honrubia,ayaa wakalaada Wararka AFP u sheegay in Neymar iyo Sandro Rosell loo haysto dacwad laxiriirta musuq maasuq ay sameeyeen 2013 markii uu Neymar ku soo biirayey Barcelona markaas oo ay qariyeen lacag aad u fara badan.
ose Maria Vazquez Honrubia, ayaa intaa ku daray in kiiska loo haysto Neymar iyo Madaxweynhii hore ee Barcelona Sandro Rosell ay keeni karto in lagu xukumo 6 Sano oo Xabsi ah taas oo uu dhigayo sharciga dalka Spain.
Neymar ayaa Barcelona kaga biirey kooxda Paris Saint-Germain bishii August 2017.markaas oo ay ku iibsatay lacagtii ugu badnayd ee abid Cayaaryahan kubada Cagta ah lagu iibsado waxaase beryahaan soo baxayey in uu dib ugu laaban doono Barcelona taas oo sida lasheegay keeni karta in uu galo Xabsi mudo 6 Sano ah.